Maxaa dooriyay magacyadii hore ee Soomaalida? - BBC News Somali
Maxaa dooriyay magacyadii hore ee Soomaalida?
Magacyada ay Soomaalidu isu bixin jirtay qarniyadii 19-aad iyo 20-aad, ayaa waxaa lagu bixin jiray hadba dhacdada uu kusoo aado ama maalinta uu kusoo beegmo ilmaha dhashay, iyo in laga dhaxlo qof muhiim ka ah bulshada ka tirsan.
Waayadan danbe waxaa bulshada Somaalida kusoo badanaya in ay baxsadaan magacyada Carabta iyo magacyo kale oo casriyeysan iyo weliba magacyo qaarkood aanay ujeed iyo meel loogu hagaago lahayn.
Mowliid Aadan Biixi oo aad u yaqaano magacyadii lala bixi jiray ayaa BBC u sheegay in magacyada la'isugu bixiyo labo hab oo kala ah , in magaca laga dhaxlo qof wanaagsan iyo magac ku saleysan dhaqanka Soomaalida.
"Marka magaca ilmaha loo bixinayo, horta labo hab ayuu ahaa,mid waa magac dar oo tusaale ahaan qof wanaagsan oo jiray ama wadaad ah ama Saxaabadii oo magaca qofka loo raaciyo iyo magaca xero-u-dhalad ah oo ay Soomaalida afkeedu, hiddaheedu iyo ahaanshaheedu kusoo baxa" ayuu yiri Mowlid oo u warramayay weriyaha BBC Sidiiq Burmad.
Soomaalida ayaa ah dad reer guura ah waxay inta badan carruurta u dhasha ugu magac dari jireen magacyada xaalaadda taagan iyo xilliyada lagu guda jiro.
Jiilka cusub ee Soomaalida, iyo dhaqanka doorsoomay
Maxaa iska badalay dhaqanka Soomaalida?
Siyaabooyinka magacyda la'isugu bixin jiray
Mowliid Aadan Biixi ayaa siyaabooyinka soo socda u kala qaaday magac bixintii Soomaalida,
Xaaladda uu qofka dhasho, waxay inta badan ku saleysan tahay xaaladaha markaas taagaan oo ay ku jireen jireen Soomaalida, sida abaaraha, barwaaqada, ciidda, maalin Jimco ah, iyo xilliyada sannadka.
Goobta uu ku dhashay ilmaha, waxaana loo bixinaya magaca deegaanka, ama degta.
Saadaalinta aayo wanaagsan, magacyadan waxaa ilmaha loo bixin jiray iyadoo loo rajeynayo mustaqbal wanaagsan, sida magacyada, Samatar,Guutaale iyo Samaale.
Nolosha qoyska, haddii qoyska uu sannadkaas wax dhibaata aysan dhexmarin islamarkaasna hooyada aysan gurigeeda dhaafin haddii uu khilaaf yimaado, waxaa loo bixiyaa sida magaca, Nageeye.
Inanka hablo badan ka daba dhasho, waxay hooyada u bixisaa magac gaar ah canugan maadaama ay ku rajo qabtay inay hesho si uu uga caawiyo nolosha qoyska.
Waxay u muuqata in baryahan dambe ay meesha kasii baxayaan magacyadii ku saleysnaa dhaqanka balse weli waxaa laisku bixiyaa magacyada dadkii wanaagsanaa iyo saxaabada.
Waxaa hadda ilmaha loo bixiyaa magacyada laga maqlay aflaamta musalsalka ah, ciyaartooyda, iyo dadka caanka ah ee haddii ay doonaanba aan Soomaali iyo muslim toona ahayn.
Tani waa arrin la xiriirta isbadelka xilliga, sida ay wax u socdaane waxaa jirta saansaan ah in qarni ka dib ay suuli doonaan magacyadii hore ee Soomaalida.
Qaar Ka mid ah Magacyadii hore
Iyo kuwa kale oo badan oo inta badan tilmaamaya sifooyinka lala xiriiriyay qofka.